म पनि यही रोगको सिकार भएको व्यक्ति हुँ । मलाई याद छ, कक्षा १० मा पढ्दा टाइफाइड हुँदा पनि औषधि खाएर विद्यालय पढ्न गएको । धेरै आफन्तको बिहे अनि मलामी छाडेर पढेको थिएँ । मलाई धेरै नम्बर ल्याउनु थियो, टप गर्नु थियो । म कक्षा १० मा निकै राम्रो पढ्ने विद्यार्थीमा पर्थें । गणित, विज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, अप्सनल म्याथजस्ता विषयमा पूर्णांक ल्याउँथे । तर, आज जीवनलाई फर्केर हेर्दा ती अंक शून्य लागिरहेछन् । दिदीको बिहेमा जाँदा दुई–चार अंक कम आउँथ्यो होला, तर ती पल यी दुई–चार अंकभन्दा ठूला थिए । मेरो स्वास्थ्य ती नम्बरभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ । पढ्नुपर्दैन भन्ने आशय होइन तर, जीवन अनि हाम्रा सम्बन्धभन्दा ठूलो पढाइ बनाइनुहुँदैन । परीक्षा महत्वपूर्ण हुन्छन्, तर पढाइका नाममा जसरी हामी बालापन अनि जवानी त्याग गर्दै छौँ, जुन मूल्य चुकाउँदै छौँ, त्यसमा प्रश्न हो ।
पढाइको अंकले मात्र करिअरको उत्कृष्टता मापन गर्न सक्दैन । हाम्रो विचार, सोच प्रत्येक दिन बदलिन्छ भने तपाईंले कुनैवेला लेखेको उत्तरले कसरी तपाईंको मापन गर्न सकिन्छ ? हाम्रो वरिपरिको वातावरण क्षण–क्षणमा बदलिन्छ भने मेरो १४ वर्षअघिको नतिजाले आज मेरो मापन किन गरिँदै छ ? त्यो नतिजाले मेरो त्यो दिनसम्मको केही ज्ञान जाँच्न सक्ला, तर मेरो भविष्यको क्षमता निर्धारण गर्न सक्दैन । तपाईं–हाम्रो मूल्य त्यो नतिजा होइन, हामीमा रहेको इच्छाशक्ति हो ।
यो कुरा नै हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । शैक्षिक ग्रेडले तपाईंको सिर्जनशीलता, नेतृत्व क्षमता, सामूहिक भाव, सामाजिक सक्रियता अनि राजनीतिक चेत दर्शाउन सक्दैन । तर, पनि हामी सब ए प्लसका पछि कुद्दै छौँ । ए प्लस महत्वपूर्ण होइन भन्न खोजेको होइन, तर त्यो नम्बर तपाईंको असली मापक होइन । तथ्य घोकेर परीक्षामा धेरै नम्बर ल्याउनु मात्र सफलता होइन । यो भनिरहँदा टप गर्ने विद्यार्थीको अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि होइन । तर, परीक्षामा धेरै नम्बर ल्याउनु मात्र सफलताको मापन होइन भनेर टप गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुझाउने प्रयास गर्न खोजेको हुँ । मिहिनेत नै नगर्ने विद्यार्थीलाई नपढेर ठीक भयो भन्ने आशय पनि होइन, तर हाम्रो सफलता समस्याको समाधान खोज्नुमा मात्र छैन, समस्या पहिचान गर्नुमा पनि छ । यो कुरा हामी भुल्दै छौँ । त्यो कला किताबले मात्र सिकाउँदैन । परीक्षाले मात्र मापन गर्दैन ।
केही दिनअघि एकजना भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ । उनी आफ्नो प्रेमकथा सुनाउँदै थिए । उनलाई एकजनाले मन पराउने रहिछन् । केटाले पनि मन पराउन थालेछन् । तर, उनीहरू प्रेम प्रस्ताव राख्न परीक्षा कहिले सकिन्छ भनेर कुर्दै रहेछन् । उनीहरू स्नातकका विद्यार्थी थिए । अरे यार, मन मारेर पढाइमा सफल हुनुको के मूल्य ? तपाईंको साँचो प्रेम तपाईंको पढाइभन्दा महत्वपूर्ण छ । प्रेम गरेर पढाइ बिगारौँ भनेको होइन । पढाइको नाममा मन मारेर प्रेम नत्यागौँ भनेको । प्रेम सम्बन्ध अनि पढाइबीच सन्तुलन आवश्यक छ । मैले धेरै मानिस पढाइका कारणले प्रेमबाट पन्छिएको देखेको छु । केही मानिसले पढाइ सकेर बिहे गर्छु भनेर निकै ढिलो बिहे गरेको पनि देखेको छु । यसले हाम्रो जीवन खल्बलिएको छ ।
शिक्षाले जीवनलाई सहज बनाउने हो खलबल्याउने होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो । शैक्षिक शोधकर्ता क्यारन आरनोर्डले गरेको अनुसन्धानमा टपरको करिअर सफल हुने गरे पनि उनीहरू माथिल्लो दर्जामा कमै मात्र पुग्ने गरेको देखिएको थियो । डा. आरनोर्ड, स्वर्णपदक विजेता विद्यार्थीमा दूरदर्शिताको कमी रहने बताउँछन् । यी विद्यार्थी प्राय: सिस्टमकै सहयोगी बन्छन्, सिस्टम हल्लाउने तागत राख्दैनन् । त्यसैले टपर मात्र सफल हुन्छन् भन्ने होइन । त्यो सफलताको मापन केले गर्ने भन्ने हो । परीक्षाको नतिजाले वा जीवनको यात्राले ?स्टिभ जब्सले उच्च शिक्षा सक्दै गर्दा २.६५ जिपिए ल्याएका हुन् । हाम्रै हरिवंश आचार्य एसएलसी फेल भएका हुन् ।
चर्चित मार्टिन लुथर किंग जुनियरले कलेजको चार वर्षमा एकचोटि एउटा मात्र ए ल्याएका थिए । खोक्रो ग्रेडका लागि कुद्नेभन्दा पनि आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्न तपाईं कति सक्रिय हुनुहुन्छ ? प्रश्न यहीँनेर उठ्छ । नम्बर घट्ला, ग्रेड कम आउला, तर हाम्रो लक्ष्यप्रतिको ऊर्जा ग्रेडकै कारणले घट्नुहुँदैन भन्ने हो । मैले एसएलसीमा डिस्टिङ्सन ल्याएँ । बिरामी हुँदा पनि, कालो चिया अनि थिनआरोट बिस्कुट खाएर स्कुल गएर दिनभरि पढेँ । आज फर्केर हेर्दा, म यदि १४ वर्षअघि फर्कन पाउँथेँ भने, म बरु कम नम्बर ल्याउन तयार हुन्थेँ, तर त्यसरी स्वास्थ्य मारेर स्कुल जाँदिनथिएँ । आज फर्केर हेर्दा, नम्बरका लागि मेरा सानो–सानो खुसीमा सम्झौता गर्दिनथिएँ होला । अझ कम पढ्थेँ होला । बाहिरी ज्ञान बटुल्थेँ होला ।
आफ्नो रुचिका लागि अझ समय दिन्थेँ होला । आज मैले विज्ञानमा चित्र छापेर कटाएको समयमा आफ्नो नेतृत्वकला अनि लेखन सुधार्न सक्थेँ होला । जीवन जिउने कलाबारे अझ बुझ्थेँ होला । खासै माने नराख्ने परीक्षाको उत्कृष्टताको पछि दौडिँदैन थिएँ होला । त्यसैले, यो लेख पढ्दै गरेका भाइबहिनी अनि साथीमा जीवनलाई अनि तपाईंको उद्देश्यलाई त्यो मार्कसिटको सानो घेराबाट मात्र नहेर्न अनुरोध गर्छु । त्यो पढाइको साटो तपाईंले सिकेको सीप अनि भोगाइले भविष्यमा अर्कै सफलताको मार्गचित्र कोर्न सक्छ । सायद तपाईंको कम नम्बरले नै तपाईंलाई जीवनमा बढी उपलब्धिको मार्ग तय गर्दै छ कि ? कहिलेकाहीँ परीक्षामा खाएको आलुले भोलि ठूलो फल पो दिन्छ कि ?
पहिले एसएलसीलाई, अहिले एसइईलाई फलामेढोका भनिन्छ । एसइई फलामेढोका होइन । यो परीक्षालाई यसरी ब्रान्डिङ गरिएको छ कि एसइई पास गरेपछि सबै कुरा जितियो । यो परीक्षाले तपाईंको जीवनमा त्यस्तो ठूलो केही असर पार्दैन । तपाईंले ल्याएको नम्बरले तपाईंको दक्षता दर्शाउँदैन । यो हौवाले बेकारमा विद्यार्थीलाई आतंकित पारेको छ । केही शैक्षिक संस्थाको व्यापारको साधन बनेको छ ।
कलेजका बोर्ड रंग्याएर पत्रिकाको विज्ञापनका लागि विद्यार्थीको नम्बर प्रयोगको माध्यम बनेको छ । हामीले एसइईलाई यस्तो आतंक बनाइदिएका छौँ कि आज विद्यार्थी परीक्षाको नतिजासँगै आत्महत्या गर्छन् । त्यो हत्याको दोषी को ? खोइ हाम्रो शिक्षा प्रणाली बोलेको ? जीवनभन्दा पढाइ ठूलो होइन भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षाले सिकाउनै सकेन । हामीलाई हाम्रो शिक्षाले ‘कम्फोर्ट जोन’भित्र बसेर काम गर्न सिकायो । प्रगतिका लागि प्रयोग जरुरी छ । रिक्स जरुरी छ । जुन हाम्रो शिक्षाले सिकाउनै सकेन । एसइईलाई सधैँ खिया लाग्ने फलामेढोका बनाइयो ।
मैले दुईवटा जीवन बाँचेको छु । प्लस टुसम्म सफलता पाएको छु । टपर बन्ने मौकासमेत पाएको छु भने स्नातकमा गएर फेल भएको छु । कम नम्बर ल्याएको छु । तर, जीवन बुझ्न अनि समाज बुझ्न मैले स्नातकसम्म पुगेर किताबभन्दा बाहिर निस्कनै प-यो । त्यतिवेला मेरो नम्बर घट्यो, तर ज्ञान बढ्यो । हामी भने, एसइई वा अन्य परीक्षालाई नै सर्वस्व मानेर बसेका छौँ । यसका लागि हाम्रा अभिभावकको अल्प बुझाइ पनि महत्वपूर्ण छ ।
दोष समाजको अनि शिक्षाकै छ । हाम्रो शिक्षा ‘कस्मेटिक’ बन्दै छ । फोटो राम्रो निकाल्न फोटो एडिट गर्ने हो कि, मान्छे राम्रो बनाउने हो ? हाम्रो शिक्षाले फोटो एडिट गर्ने बाटो रोजेको छ । धेरैलाई पास गराउनलाई राम्रो शिक्षा दिनेभन्दा पनि अन्य बाटो खोज्छ । धेरैलाई पास गराउँछ । गेस पेपरमा प्रश्न बाँड्छ अनि चिट चोराएरै भए पनि शतप्रतिशत पास गराउँछ । अनि, फेरि त्यही नतिजालाई नै सर्वस्व मान्छ । हामीले शिक्षालाई सुधार्न जरुरी छ । शिक्षाप्रतिको धारणा बदल्न जरुरी छ । शिक्षालाई जीवनसँग जोड्न जरुरी छ�
जोखिममा एसईईको गरिमा
कसरी बन्ने बेलायती आर्मी ?
आयल निगमको घाटा बढ्यो
असुरक्षित बन्दै चाँगुनारायण क्षेत्र
किशोरवयमा गर्भपतनको डरलाग्दो रुप